बर्षा र आँचलको सम्बन्ध मिडिया अघि मात्र हो ? « Mazzako Online
बर्षा र आँचलको सम्बन्ध मिडिया अघि मात्र हो ?
यस्तै देखिएको छ अहिले नायिका वर्षा राउत र आँचल शर्मा बिच पनि । आँचल र बर्षाले एउटै ब्यानर बाट डेब्यु गरेका हुन । बिकास राज आचार्यको नाइ नभन्नु ल ४ बाट डेब्यु गरेका यि दुई नायिकाको सिने नगरीमा खुबै चर्चा हुने गर्छ । सँगै काम गरेका कलाकार बिच दुस्मनी बढेको पनि देखिएको छ र अत्ती नै मिलेको पनि ।
आँचल र बर्षाले सँगै काम गरे पनि उनिहरु बिच न त राम्रो दोस्ती नै छ न त दुस्मनी नै । हुन त दुई बिच खासै राम्रो नभएको पनि सुनिन्छ तर सार्वजनिक कार्यक्रम र मिडियामा भने सधैं आफुहरु मिल्ने साथी हो नै बताउछन् । यि दुईले नाई नभन्नु ल ४ पछी सँगै काम गरेको चलचित्र दाल भात तरकारी हो जसले भर्खरै ५१ दिन मनाएको छ । चलचित्रको सक्सेस पार्टिमा दुबै नै उपस्थित थिए । मिडिया अगाडि दुबै एक अर्काको नै तारिफ गर्दै थिए र एक अर्काको लागि नै बोल्दै थिए ।
तर उनीहरु धेरै नजिक भने छैनन् । आँचल र बर्षालाई एक अर्काको प्रतिस्पर्धी मानिन्छ । त्यसैले एक अर्कासँग धेरै नखुलेको हो कि जस्तो लाग्छ । फेरी मिडियामा उनीहरुको कुरा सुन्दा अत्यन्तै मिल्ने साथी हुन कि जस्तो पनि लाग्छ । कतै वर्षा र आँचलको मित्रता क्यामेरा अगाडि मात्रै पो हो कि ?